ဘယ်လို pacifier ငါ့ကလေးကနို့ကွာနိုင်သလဲ
Pacifier နို့ကွာ | ကလေးကလေးငယ်
အသုံးပြုအီစတာယုန်, ကလေးယေရှုနှင့် Soother
ကလေးသူငယ်များနှင့်ထောက်ကလေးအရွယ်တုန်းကခဲအနွယ်ထို့ကြောင့်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ကြွင်းထားသည့်အခါသူတို့ကပိုဒါမှမဟုတ်ဒီထက်နည်းသူတို့အကြိုက်ဆုံးဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့်မိဘများပျော်ရွှင်ဖြစ်ကြ၏ဘို့, pacifiers မပါဘဲစိတ်ကူးနိုင်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံးသူတို့ရဲ့ကလေး၏ pacifier နို့ကွာသောအခါသူတို့အရှင်ကွုံရသောအခါနေဆဲ, များစွာသောမိဘများရှုပ်ထွေးဖြစ်ကြသည်။
အကွံဉာဏျ pacifier နို့ကွာ
တချို့ကကျွမ်းကျင်သူများကကလေးတစ်ဦးနှစ်ဦး၏အသက်ရှေ့တော်၌ထို pacifier ကနေနို့သင့်ကြောင်းပြောဆိုကြသည်။
အကြောင်းပြချက်တစ်ခု pacifier ၏အချိန်ကြာမြင့်စွာအသုံးပြုလာသောအခါထိုသူငယ်သွားသို့မဟုတ်မေးရိုးတစ် misalignment ဖြစ်ပေါ်တဲ့အန္တရာယ်ဖြစ်ပါတယ်။
အများဆုံးကလေးတွေမှာတော့အာမခံ၏ pacifier အဓိကအားဖြင့်အသုံးပြုသည်။ အထူးသဖြင့်ညဥ့်အခါသူထို့ကြောင့်တိုးမြှင့်လိုသည်။ pacifier အသုံးပြုမှုများ၏အကြောင်းရင်းကလေး၏သဘောသဘာဝ၌တည်ရှိ၏။ ကလေးများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အရေးပါသည်သောနို့စို့နို့စို့၏ဆင်တူနို့စို့များ၏တုံ့ပြန်မှု။ မိခင်နို့တိုက်ကျွေးအစားအသောက်များတွင်အပြင်လည်းငြိမ်သက် function ကိုရှိခဲ့ပါသည်။
အတော်များများကသူနာပြုမိခင်များကလေးသူငယ်အခသာညဥ့်မှာရင်ဘတ်၏ဆုကြေးဇူးကိုတို့ကမကြာခဏအေးဆေးတည်ငြိမ်ကြောင်းအတည်ပြုပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါ pacifier အလားတူအလုပ်မတတ်နိုင်နိုင်ပါတယ်။
ကကလေးငယျတနည်းလက်မအစား pacifier ရွေးချယ်ကြောင်းဖွစျနိုငျစရာ pacifiers သင်ကလေးကဟောကြားခဲ့ပါတယ်။
သို့သျောလညျးကိုသင်ကျွမ်းကျင်သူများကယုံကြည်, ဒါ pacifier လက်မထို့နောက်နို့စို့ပေမယ့်ဦးစားပေးမည်ဖြစ်ပါသည်, အဆိုပါအကြောင်းပြချက်တစ်ခု soother အပေါ်နို့စို့ထငျရှားစအစောပိုင်းကသူ့လက်မနို့စို့ထက်စွန့်ပစ်ကြောင်းနောက်တဖန်ဖြစ်ကြသည်။
နို့စို့, အဖြစ် pacifier မှတဆင့်လက်မထက်ပိုပြီးလေးနက်ဖြစ်ခြင်းအားဖြင့်တစ်ဦးမဟုတ်တော့ကာလအတွင်းပေါ်ထွန်းစေခြင်းငှါသွား၏ဖြစ်နိုင်သော misalignments ။
ဒါ့အပြင်သင်ပိုကောင်းလက်မထက် pacifier ၏ဆုကြေးဇူးကိုထွက်တိုင်းတာနိုင်သည်, ထိုသူငယ်အမြဲရှိပါတယ်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, သင်အကောင်းဆုံးချစ်ရာသခင်သည် pacifier နို့ကွာသင့်ကလေးကိုပေးနိုင်ပါသည်ဘယ်လောက်၏မေးခွန်းကိုနောက်တဖန်အများအပြားအသစ်သောမိဘများအတွက်ဖြစ်နေဆဲ?
နို့ခင်မှာလေ့၏ပထမဦးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ကြောင်းနို့ဖြတ်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာပိုမိုလွယ်ကူစွာကျလိမ့်မည်ကွောငျ့ထို့ကြောင့်ပြီးသားအစကတည်းကထံမှတစ်ဦးအမြဲတမ်းဝန်ဆောင်မှုဖြစ်လာမည်မဟုတ်ကြကုန်အံ့။ ရှေ့ဦးစွာ မှစ. , သငျသညျထိုကဲ့သို့သောလမ်းလျှောက်သို့မဟုတ်အာမခံအတှကျအိပျပျြောနေစဉ်အတွင်းအဖြစ်သာအခြို့သောအခြိနျ၌ pacifier ပူဇော်သင့်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင်သင်ရုတ်တရက်တနေ့ကနေလာမယ့်ရန်ကလေးသည် pacifier နို့ကွာမပေးသင့်ပါတယ်။ ပြီးပြည့်စုံသောချုပ်ရာအဖြစ်အများကြီးပိုလွယ်သောကြောင့်ထိုသို့သို့သော်တဖြည်းဖြည်း pacifier ချန်လှပ်ရန်အကြံပြုသည်။ မိဘများကလေးသူငယ်အခပေးရမည်ကြောင့်ယခုကြီးမားတဲ့မိန်းကလေးသို့မဟုတ်ကြီးမားသောကောင်လေးနှင့်ယခုတကယ်မပို pacifiers လိုဖြစ်အကြီးအဖြစ်နိုင်သည်ကိုအတည်ပြုသင့်တယ်။
သူငယ်၏ချုပ်ရာလွယ်ကူချောမွေ့စေရန်အတွက်, သငျသညျအမြိုးမြိုးသော tools များသုံးနိုင်သည်။ တဦးတည်းဖြစ်နိုင်ခြေဘာသာရပ်အပေါ်တစ်ဦးသားသမီးရဲ့စာအုပ်ရဖို့ဥပမာ, ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာအားလည်းကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန်ထိုကဲ့သို့သောသင်ယူမှုစာအုပ်တွေ, သူငယ်တန်း, မှေးခငျြးသို့မဟုတ် potty ၏ပြဿနာတစ်ခုကအလွန်ကျယ်ပြန့်ရှိပါတယ်။
ကလေးအတော်များများသည်ဤပုံပြင်များစိတ်ဝင်စားလာကြ listen သူတို့မကြာခဏ re-ပြဋ္ဌာန်းချင်တယ်။ Conny မပို pacifiers လိုအပ်ကြောင်း, သင်ထို့ကြောင့်လည်းမကြာခဏရုံမဟုတ်တော့တဲ့ pacifier နှင့်နို့ဖြတ်လွယ်လိုအပ်ပါတယ်ဖို့တိုက်တွန်းဖွံ့ဖြိုး။
ဒါကြောင့်လျော့နည်းမကြာခဏ pacifier သုံးစွဲဖို့အသိလုပ်နိုင်အောင်အဆိုပါကလေးကနားလည်နိုင်ပါတယ်။
အခြားကောင်းသောလမ်းတစ်ခုအဆုံးမှတစ်ဦးအပိုင်းရှိကွောငျးထိုသူငယ်ဒါရှင်းရှင်းလင်းလင်း ရရှိ. ကောငျး-Bye အောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ခဲ့သော pacifier မှနှုတ်ဆက်ပြောသူငယ်ကိုကူညီပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ဦးသွား၏ဆုံးရှုံးမှုကိုဆင်တူသည် pacifier Soother လုပ်ငန်းစဉ်များ၏ပူးတှဲ၏ပေးပို့ဘို့ analog အလုပ်နိုင်ပါသည်။
အဆိုပါနတ်သမီးပုံပြင်ထို့နောက်ထံမှလက်ဆောင်တစ်ခုအဘို့, ခေါင်းအုံးအောက်မှာထားထားတဲ့ pacifier, ဖလှယ်ခြင်း။ တစ်ဦးကထပ်မံဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ဦးနှင့်အတူ pacifier များ၏ပို့ဆောင်မှုအတွက်အီစတာယုန်သို့မဟုတ်ခရစ်တော်တည်းဟူသောကလေးကလျှောက်ထားရန်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါအီစတာ Bunny ထို့နောက်လှပသောဆုကြေးဇူးကိုဆန့်ကျင် pacifier ၏ Soother ဆင်တူဖလှယ်ခြင်း။
အဘယ်သူသည်လညျးမိမိကလေးနဲ့အတူအခြားသေးငယ်တဲ့မွကွေီးဖို့ pacifier ၏သွားတာဆှေးနှေးနိုငျတဲ့သူမိတ်ဆွေများကိုသို့မဟုတ်မိသားစုအခြားကလေးငယ်။ အဆိုပါမွေးကင်းစကလေးငယ်ကလေးယခုပိုပြီးအရေးတကြီးကတော့ pacifier လိုအပ်ကြောင်း, ဥပမာ, ထို့နောက်ကရှင်းပြသည်နိုင်ပါသည်။
ကလေးများပိုကြီးပြီးပိုအတွေ့အကြုံရှိစေခြင်းငှါစိတ်အားထက်သန်နေကြသည်ကတည်းကဤဆင်ခြေကိုလည်းမကြာခဏအလွန်ကောင်းသောထားပါတယ်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင် Soother သို့မဟုတ်ဤအားလုံးလေ့လာတွေ့ရှိခြင်းနှင့်လုံခြုံစိတ်ချစွာစာနာအီစတာ Bunny / ခရစျတျောကလေးကအသိအမှတျပွုဖြစ်ပါတယ်နှင့်အတူပေါင်းစပ်။ ဒါဟာသင်တို့သည်အလျှင်းမသင့်ကလေးကိုတွန်းဖြစ်ကြောင်းဆိုအမှု၌အရေးကြီးပါသည်။
တစ်ခုချင်းစီကိုကလေးက၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အရှိန်အဟုန်ရှိပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်နှိပ်စက်နိုင်အောင်နှိုင်းယှဉ်ပါဘူး, ဒါပေမယ့် pacifier ကနေတဖြည်းဖြည်းသင့်ကလေးကိုနို့ကွာ။ မှန်ကန်စွာ Dosed, ဒီတကယ်တော့သားတို့သည်သွားဘို့အဘယ်သူမျှမကပ်ဆိုးကြီးဖြစ်ပါသည် - ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, ငါတို့ရှိသမျှသည် pacifier အသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့သည်။
ကလေးသူငယ်များ & ကလေးငယ်များ၏သေနတ်များအတွက်နေရောင်ကာကွယ်ဆေး | ကနျြးမာရေး ...
Hitzewelle – Baby und Kleinkind schützen
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်ဆေးလိပ်သောက် | ကျန်းမာရေး & ကလေး
ကလေးကနေဆံပင်ထိန်းသိမ်းရန် - မွေးကင်းစကလေးငယ်ပြုစုစောင့်ရှောက်မှု
ကလေးစောင့်ရှောက်မှု - ခန္ဓာကိုယ်စောင့်ရှောက်ကလေး
ကလေးစောင့်ရှောက်မှု - ကလေး၏မျက်နှာ
ကလေးစောင့်ရှောက်မှု - အံ့ဖွယ်ဖိုးကလေး
ကလေးနှင့်အတူ Coloring မောင်နှမ
ကျနော်တို့ကလေးများနှင့်လူကြီးများအတွက်အခမဲ့သရုပ်ဖော်ပုံများ, print ထုတ်လို့ရတဲ့ချွတ်ယွင်းပုံများ, Point-to-point သင်ထောက်ကူ, ကလေး-ဖော်ရွေဒီဇိုင်းများနှင့်အတူ drawings နဲ့ပုံကြမ်းနှင့်အတူအခမဲ့နံပါတ်များ, ပဟေဠိ, အရောင်စာအုပ်များအားဖြင့်သုတ်ဆေးနှင့်အတူငါတို့သားသမီး၏ဤဖန်တီးမှုဖှံ့ဖွိုးတိုးတထောက်ခံပါတယ်။ အခမဲ့အရောင်စာမျက်နှာကို download လုပ်ပါကအထဲက print ထုတ်ခြင်းနှင့်ပန်းချီကိုစတင်ပါ။ ဘာသာရပ်ပေါ် မူတည်. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Malbilder ကလေးများနှင့်အားလုံးအသက်အရွယ်မရွေးအရွယ်ရောက်သူများအတွက်သင့်လျော်သောများမှာ - မိန်းကလေးငယ်များသို့မဟုတ်ယောက်ျားလေးများရှိမရှိ: ထောက်ကလေးအရွယ်တုန်းက, မူကြိုကျောင်းသားများ, ကျောင်းကလေးများ, ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်လူကြီးများ။ အတော်များများက themes များမှာလည်းရေစောင်ရေများအတွက်ပုံကြမ်း, အသွားအလာဆိုင်းဘုတ်များ, အချိန်သို့မဟုတ်နေကြတ်အဖြစ်စာသင်ခန်းထဲမှာဆရာ, ဆရာမများအတွက်သင့်လျော်သောဖြစ်ကြသည်။
လူကြိုက်အများဆုံး: ကလေးများအကြောင်းကို quotes | StadtLandFluss play & တင်းပလိတ်များ | ဂျာမဏီ 16 ပြည်နယ်များ | ယူအက်စ်အေစတိတ် | အတူတူ Showering | ခေါ်ဆောင်သွားကဗျာ | နို့တိုက်ကလေး | ကြောကျထိုး | ရေးတဲ့နတ်သမီးပုံပြင်ပဟေဠိ | | သစ်ခွစောင့်ရှောက်မှု | ပြင်သစ်ပေါင်မုန့်ချက်ပြုတ်နည်းများ | နေကြတ် | သားသမီးရဲ့ကိစ္စများ | ချစ်ခြင်းမေတ္တာကဗျာတစ်ပုဒ် | ကလေးများအကြောင်းကိုကဗျာ | ရယ်စရာစကား | ရသေံ | မိသားစုသစ်ပင် | ကမ္ဘာ၏မြေပုံ | Mandalas လူကြီးများ |
အားလုံးအရောင်စာမျက်နှာများကို download လုပ်ပါဆုံးနဲ့အရောင်စာမျက်နှာများတွင်ဘို့ရန် pdf format နဲ့ရရှိနိုင်ပါ, ငါတို့အခမဲ့ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်ဂရပ်ဖစ် format နဲ့ high-resolution ကိုဗားရှင်းကိုဆက်ကပ်။
ထိတှေ့ | နှိပ်ရာ | သီးသန့်လုံခြုံရေး | မူပိုင်ခွင့် | ↑ထိပ်တန်း↑ | ပုံဆွဲသွန်သင်နိုင်မည် | နေအိမ်
ဂရိတ်ကလေးစာအုပ်များ & ကစားစရာ